Mayday, Mayday nke ndị omebe iwu US niile na ndị nnọchi anya Hawaii zigara ndị agha mmiri
Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Na -agbasa Akụkọ Mba Nile » Akwụkwọ akụkọ USA » Mayday, Mayday nke ndị omebe iwu US niile na ndị nnọchi anya Hawaii zigara ndị agha mmiri
Akụkọ Ọchịchị • Akụkọ Mgbasa Ozi Hawaii • News • Akwụkwọ akụkọ USA
Mgbe 1,618 galọn mmanụ ụgbọ elu JP-5 tọhapụrụ site na pipeline dị n'ime Red Hill Bulk Fuel Storage na Oahu, Hawaii na Mee 6, ndị agha mmiri gwara ọha na eze na ọ dịghị mmanụ ọkụ ewepụtara na gburugburu ebe obibi. Nke a abụghị eziokwu dịka ndị agha mmiri chọpụtara n'uju ihe wụfuru.
Ọ bụ ezie na ndị isi ụwa na-ezukọ na Glasgow, UK maka COP26 iji kwurịta gburugburu ebe obibi na mgbanwe ihu igwe, ọdachi na-aga n'ihu na Hawaii na-adabere na njem nlegharị anya na-apụta ma ghọọ isi okwu mba.
N'ọnwa Jenụwarị n'afọ a, ndị ọrụ ụgbọ mmiri nwere ihe akaebe zuru oke iji gosi na pipeline jikọtara ya na Red Hill Bulk Fuel Storage Facility Facility System na-agbanye mmanụ n'ime Pearl Harbor dị nso na Hotel Pier. Agbanyeghị, a gwaghị Ngalaba Ahụike ruo Mee, dịka akwụkwọ ozi DOH siri kwuo.
Nke a na-atụgharị ghọọ nnukwu ihe iyi egwu gburugburu ebe obibi na Hawaii.
Ụnyaahụ ndị nnọchi anya 4 US na ndị omebe iwu nke steeti Hawaii degaara Ngalaba Navy akwụkwọ ozi a.
Nke a bụ ndegharị akwụkwọ ozi izizi:
Onye Honourable Carlos Del Toro
Odeakwụkwọ nke ndị agha mmiri
1000 Pentagon Navy
Ezigbo odeakwụkwọ Del Toro,
Anyị na-ede na-enwewanye nchegbu banyere nchekwa nke mmanụ ụgbọ mmiri si ọrụ na Hawaii. Anyị na-enwe nchegbu karịsịa maka akụkọ banyere mpụ mmanụ ụgbọala dị nso na Hotel Pier na Joint Base Pearl Harbor-Hickam (JBPHH) nke mere na Machị 2020 na ebubo na ndị agha mmiri ahụ esiteghị n'ụzọ kwesịrị ekwesị banyere isi iyi na ọnụ ọgụgụ mmanụ ahụ na ndị na-achịkwa steeti, ndị ọrụ gọọmenti etiti, na ọha mmadụ—gụnyere ụlọ ọrụ anyị.
Ndị agha mmiri ahụ kwere nkwa itinye ndị Hawaii site n'ụlọ ezumezu obodo na bọọdụ ndị agbata obi, iji mee ka ndị na-achịkwa steeti na ndị isi okwu dị nkenke, yana ime ka usoro nkwurịta okwu ghere oghe na ndị nnọchi anya ọgbakọ omebe iwu Hawaii banyere ihe ndị agha mmiri na-eme ka ha bụrụ ezigbo ndị nlekọta gburugburu ebe obibi. . Ọ bụ ya mere anyị ji nwee ndakpọ olileanya na mbụ ịmụta banyere ụlọ nkwari akụ Hotel Pier na ndị nta akụkọ kama ịnụ n'aka ndị isi ndị agha mmiri ozugbo.
Mkpebi nke ndị agha mmiri ka ha ghara ikweta n'ihu ọha na ụlọ nkwari akụ Hotel Pier na-akọwa ihe ọ na-eme iji gbochie ntapụ n'ọdịnihu bụ ekwekọghị na nkwa ndị odeakwụkwọ nke ụgbọ mmiri gara aga mere ndị Hawaii ka ha nọgide na-ahụ anya n'ihe niile nwere ike imetụta gburugburu ebe obibi anyị. akụrụngwa. Ọzọkwa, ọ na-esote mwepu mmanụ ụgbọala May 6 na Red Hill Bulk Fuel Storage Facility nke ndị agha mmiri gwara ọha na mbụ na ọ nweghị mmanụ a na-ewepụta na gburugburu ebe obibi, nkwupụta anyị mụtara na ọ bụghị eziokwu ozugbo ndị agha mmiri chọpụtara oke nke kwafuo. Ihe ndị a mere n'oge na-adịbeghị anya, gụnyere ụzọ ndị agha mmiri si zaghachi ha na enweghị nghọta ya na ọha na eze, na-ewelite ajụjụ banyere ịdị mkpa nke ndị agha mmiri na-ewere ọrụ ya iji gwa ọha na eze okwu n'ụzọ doro anya banyere ihe gbasara ahụike na nchekwa. Ndị Hawaii kwesịrị ka mma n'aka ndị agha mmiri.
Dị ka ọ na-emetụta Hotel Pier merenụ, anyị nwere kpọmkwem nchegbu na-ajụ ajụjụ otú ndị agha mmiri na-arụ ọrụ na-eduzi na-elekọta nke mmanụ ụgbọala ọrụ na Hawaii. Anyị na-arịọ azịza n'oge na nke ọma maka ajụjụ ndị a:
1) Kedu usoro ndị ọrụ ụgbọ mmiri jiri chọpụta isi iyi na oke nke ụlọ nkwari akụ Pier na usoro ndị ahụ ọ gbasoro nchekwa ndị agha mmiri na ụkpụrụ nnwale nke o guzobela iji melite nchekwa nke ọrụ mmanụ ụgbọala ya na nzaghachi ndị ọzọ?
2) Ndị agha mmiri ahụ kwekọrọ n'ụkpụrụ mkpesa ntọhapụ mmanụ ọkụ ya niile metụtara ihe omume a wee nye ndị na-ahụ maka njikwa steeti ozi oge ya, gụnyere ozi nwere ike dabara na onye ọrụ na-anụ ikike ikike ọrụ Red Hill?
3) Kedu ihe bụ mkpokọta mmanụ ọkụ a tọhapụrụ na Hotel Pier na gịnị ka ndị agha mmiri mere iji kpochapụ ma dozie ebe ahụ metụtara?
4) Kedu ihe akaebe, ma ọ bụrụ na ọ dị, enwere ndị ọrụ ụgbọ mmiri gbochiri ozi gbasara leak nke Hotel Pier nke gaara abụworị ihe dị na ngalaba ngalaba ahụike nke Hawaii iji nwetaghachi ikike ọrụ Red Hill?
5) Kedu ihe na-esochi omume ndị agha mmiri na-eme iji chọpụta isi ihe ndị ọzọ nwere ike ịdaba na ọrụ mmanụ ya, gụnyere usoro pipeline na ma ọ bụ gburugburu JBPHH, nke nwere ike ịkpata nsị mmanụ dị ize ndụ? na
6) Kedu ihe, ma ọ bụrụ na ọ bụla, mmekọrịta ka pipeline Hotel Pier nwere na Red Hill Bulk Fuel Storage Facility na ihe ọ pụtara na nke a nwere ike inwe maka atụmatụ nkwalite ụlọ ọrụ dị ugbu a, gụnyere nke ndị nchịkwa steeti na gọọmenti etiti chọrọ?
Ndị agha mmiri ga-aga n'ihu na-emeziwanye njikwa na nlekọta nke ọrụ ya, ma na-enye ozi oge na nke ziri ezi nye ndị na-ahụ maka steeti na gọọmenti etiti iji hụ na ọrụ mmanụ ọkụ ya adịghị etinye ihe ize ndụ na ahụike na nchekwa nke ndị Hawaii. Iji mezuo nke ahụ, anyị na-atụ anya na ị ga-enye azịza nke ọma na n'oge maka ajụjụ ndị akọwara n'elu, ma ọ bụrụ na ekpughere ihe ọjọọ ọ bụla, na ị ga-emesịa mee ihe kwesịrị ekwesị aza ajụjụ.
Anyị ji nkwanye ùgwù na-arịọ ọgbakọ ndị nnọchiteanya nke ndị otu ka ha kwurịta ka ndị agha mmiri si arụ ọrụ ma na-eduzi nlekọta nke ọrụ mmanụ ụgbọala ya na Hawaii, gụnyere usoro ọ na-eme iji hụ na ahụike na nchekwa ọha na eze, n'ikpeazụ karịa Disemba 3, 2021. Daalụ maka echiche gị maka arịrịọ a. Anyị na-atụ anya ikwurịta okwu a n'ihu.
Anyị na-atụ anya ikwurịta okwu a n'ihu.
MAZIE K. HIRONO, Senator US
ED CASE, onye nnọchi anya US
KAIALIʻI KAHELE, onye nnọchi anya US